जापान लैजाने भन्दै गोविन्द तिवारीले ठगेकालाई अस्ट्रेलियाबाट सहयोग ! - Khem Sharma
काठमाडौं । आर्कषक रोजगारीको लागी जापान लैजाने आश्वासन देखाएर धेरै मानिस ठगेको भनिएका डा. क्रिस त्रिपाठी उर्फ गोवीन्द तिवारीको बिषयमा यसअघिका अंकमा हामीले निरन्तर फलोअप गरीरहेका छौँ । कार्यक्रमको अघिल्लो अंकमा हामीले हाम्रो कार्यलयमा आएका पीडितहरुको रोदनसँगै धेरै मानिसको पैसा ठगेर भागेका गोवीन्द तिवारीसँग स्काइपमा लाइभ कुरा गरेका थियौँ ।
कार्यक्रम प्रशारण भएपछि अझै पनि पीडितहरु हाम्रो कार्यलयमा आइरहेका छन् । बुधबार पुन हाम्रो कार्यलयमा कुपन्डोलमा बसि व्यापार गर्दै आएकी कल्पना थापामगर आफू पनि तिवारीबाट ठगीएको भन्दै सप्रमाण हामी कहाँ आईपुगिन् । उनलाई ४ बर्षअघि तिवारीले सपरिवार जापान पु¥याउने भन्दै २० लाख ठगेका रहेछन् ।
गोविन्द तिवारीकाबारे रिपोर्टिङ गरेपछि पीडितहरु मात्रै हैन सहयोगी हातहरु पनि जुटेका छन् । यसअघिको अंकमा झापाकी शुमी राईलाई तिवारीले ठगेपछि बालबच्चाको खर्च धान्न मुस्किल परेको भनिएको थियो ।
तर हाल अस्ट्रेलियामा व्यावसाय गर्दै आएका मनकारी खेम शर्माले शुमी राईलाई सहयोग गरेका छन् । संयोगवस मातातीर्थ औंसी परेकाले भरतपुरस्थित अस्पताल रोडमा बस्ने आमा लक्ष्मी शर्मालाई फोन गर्दा दुखीहरुलाई सेवा गरे आँफैलाई गरेजस्तो हुने भनेपछि उनले शुमी राईका छोराछोरीलाई पढाउन ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
लाखौँ रुपैयाँ ठगिएकी सुमी राईलाई थोरै भएपनि यसले सहयोग पुगेको छ । पीडितहरुले आर्थिक सहायता पाउनु हाम्रो लागि पनि गर्भको कुरा हो । तर हाम्रो प्रयास भनेको दोषीलाई कार्वाही गरि पीडितलाई न्याय दिलाउनु नै हो ।